Created on Wednesday, 08 June 2016 14:39
– नन्दवहादुर घर्तीमगर
१) प्रारम्भमा यो पार्टीको नाम राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी । परशुराम तामाङसँगको एकीकरणपछि गणतान्त्रिक संघीय जनमुक्ति पार्टी र पछिल्लो संशोधित नाम संघीय जनमुक्ति पार्टी । “यो गर्दा हुन्छ कि अथवा ऊ गर्दा हुन्छ” पार्टी नेतृत्व अन्यौलले भरिभराउ ।
२) यो पार्टीले जातीयमुक्तिको लाइन उहिल्यै छोडिसक्यो र हाल संघवादी दिशातिर वरालिईरहेको यो पार्टीको नामले पनि काफी पुष्टि गर्दछ ।
३) प्रारम्भमा जातीयमुक्तिकामी राजमुपामा गोलवन्द हुदैथिए । राजमुपाको माध्यमवाट सिंहदरवार जाने वाटो तय भइसकेको थियो । यो कुरा सत्ताधारीलाई थाहा भएपछि यसलाई विथोल्न एमएस थापालाई सत्ताधारीले अघि सा–यो ।
४) कार्यकर्तालाई संघवादी (जातीय संघीयता) वाटोमा हिड्न लगाउनु, सिमाङकनमा वराल्नु, पार्टीलाई अर्को कुनै पार्टीमा गाभ्ने मिसन पूरा नभएपछि जेठ २१ र २२ गतेको केन्द्रिय समितिको निर्णयले त्यसको ६ दिनपछि उहि महिना जेठको २८–३० गते महाधिवेशन वोलाउनु पार्टीको मेडिकल डेथ (मृत्यु) नै हो ।
५) पार्टी आफनै खुट्टाले हिड्न उसलाई वैचारिक खुराक अपरिहार्य हुन्छ । वैचारिक खुराकको अभावमा त्यो पार्टी स्वाभाविक रुपमा अपाङ्गता हुन्छ । हालको संघीय जनमुक्ति पार्टीले जहिले पनि गठवन्धन, मोर्चावन्दी, एकीकरण र विलयको वैशाकी खोजिरहनुले स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ कि यो पार्टी वैचारिक खुराकको अभावमा अपाङग छ । अपाङगताको धर्म हो वैशाकी रोज्ने ।
६) पार्टीको निर्णयको ६ दिन लगत्तै हुने आसन्न पाँचौं महाधिवेशनको पार्टी यो धर्तीमा जीवित होला कि नहोला ? सामान्य मान्छेले भन्नसक्छ कि त्यो पार्टीको मृत्यु भइसकेको छ । किनकि सानो एनजिओ वा क्लवले पनि ६ दिनको अवधिमा साधारणसभा वोलाउन उसको विधानले साथ दिदैन र व्यवहारिक हिसावले पनि त्यो काम गर्न असमर्थ हुन्छ ।
७) पार्टी कार्यकर्ताले सोचेजस्तो यो पार्टीको नेतृत्व कदापी होइन, संक्रमित नेतृत्व हो । कतै आफुजस्तै सोंच राखेको छभने त्यो दृष्टिभ्रम हो, सच्चाउनुपर्छ ।
८) यो पार्टीलाई दिशाविहिन वनाउने सत्ताधारीको मिसन पूरा भएपछि यसको नेतृत्वलाई कुकुरले हड्डी छोडे झैं छोडिसकेको छ । अहिले नेतृत्वलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अव यो पार्टीको दुइटा विकल्प छन् ती हुन्
(क) महाधिवेशनले विघटनको घोषणा गर्ने,
(ख) कुनै पार्टीमा विलय गराउने । पार्टी विलय गराउने नेतृत्वको वुदा नं. (ख) को उद्धेश्यमा इमान्दार कार्यकर्ताले विथोलेको हुनुपर्छ त्यो उद्धेश्य पूरा नभएपछि ६ दिनमा महाधिवेशन वोलाई नेतृत्वले काम टारेको हो ।
९) महाधिवेशनपछि पार्टी हिड्नसक्ने कुनै वैचारिक र सांगठनिक आधार छैन । यो त इमान्दार कार्यकर्ता थल्याउने, थकित पार्ने, हायलकायल पार्ने र पार्टी विलयमा सहज स्थिति सिर्जना गर्ने काममा मात्र नेतृत्वले आफनो वाँकि काम खर्च गर्नेछ । कुनैवेला क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुहरु र कार्यकर्ता पंक्तिलाई नेतृत्वले थकित पारेपछि मात्र समायोजनको नाममा लडाकु संगठन विघटन हुनपुगेको हो । यहि वाटोमा संघीय जनमुक्ति पार्टीको नेतृत्व छ । यो सयमा सय प्रतिशत सत्य कुरा हो ।